Kan Bishaan nyaate, Hoomocha qabata ! – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORG
Kan Bishaan nyaate, Hoomocha qabata !
On November 29, 2016 By OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORGIn oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org
Namootni mul`ata egeree hin qabne, hojii diiggaatti quufu. Dantaa matayyaa ofii dursanii ka biroof yaaduun itti hanqata. Kan har`aa irraan boruuf, fagootti ilaaluun waan itti hankaakuuf yaada dukkanaa`aa qabaniin waan xiqqoo dalaganiitti mirqaanu.
Namni sabaa fi biyyummaaf hin cillaafkanne, akkuma harree waan itti fe`aniin marga dheedaa ooltuti. Sammuun waa`ee garaa yaadu, gurri dantaa duwwaa dhaga`u meeshaa diina tajaajilu dha. ‘‘Dhugaan qallattu illee, hin cittu’’ akka Oromoon jedhu, gamoon sobaa dhadhaadhaan ijaaramaa oolus marroo hedduu baqee isaaniin mucucaatee dhabama isaaniif ta`aa as gahe.
‘Beekumsi yookiin hubannoo xiqqoon abbuma miiti’ akka jedhamu; namootni cuncula qabsoo erga laga ce`anii dhaga`an biyyoota ollaa naannaa garagaraa keessa tamsa`anii guyyuu wacanii waccisiisaa jiran tun ka`umsaa fi itti baha hin qaban. ‘‘Simbirroon waccee hin beekne, gaafa waca eegaltu badaa badaa’’ jetti akka jedhamee mammaakamu sana waan nyaaphaan itti himamu callaa mormatti kudhaammatanii dhiitee barii lafaa QBO gara dabarsuuf diiggaatti bobba`u. Qabsoo Oromoo dhiigni jaallan kumaa kitilli itti kufe, goototni itti of masakanii har`aan gahan umurii isaa lakkaa`uu fi dhabama isaa manaamaa ooluun farrummaa isaanii caalatti calaqqisiisa.
Karaan qabatanii imalaa jiran kan hin beekne, qaawwaadha jechuun kan isaanitti fakkaate haafaa citaa bu`atanii ABO irratti duula afaanfaajjii banuun mooraa qabsoo diigaa, mooraa diinaa gabbisuutti jabaatuuf ijibbaatuun eessaanuu isaan hin gahu.
‘‘Namni bara iyyoolee gurraa duude, iyyoolee jechaa hafa’’ akka jedhan, jecha diinni ittiin qor- qalbii ummata keenyaa fi jabina keenya cabsuuf nutti maxxansu butatanii Gandummaa jechaa baraa baratti ce`u. As garagaranii ammootu Tokkummaa faarsuun gurra nu duuchu. Akka Oromoof dhimmoomaniitti of waamu. Harka bitaan ammoo diina waliin boolloo nuuf qotu. Itti galli isaaniis kanuma.
‘‘Fira fakkaattee Risaan, simbira nyaatte’’ isa jedhu dalagu. Maqaa qabsoo Oromootiin, ummata keenya nyaatu. Gogaa leencaa haguuggatanii hojii waraabessaa nurratti dalagu. Qabsaa`ota Oromoo abaaraa, warra qabsoo Oromoo diiguuf tumsa bahu. Dhabama keenyaafis hojjetu.
Egaa namootni ayinaa kanaan wal harkisanii, diinaa daboo dhaquun humneessan, qe`ee abbaa isaanii laffisuun bakka nyaatanii dutan kun warreen injifatamoodha. Jireenyis isaan mo`ee harka namaa eegu. Fedhii gooftolii isaanii milkeessuuf gamaa gamas gahuun akka tittiisaa waan hunda cuuphachuun dhibee ittiin qabaman, ka biroo faaluuf miidiyaa garagaraatti dhimma bahuun of ijjibaatu.
Adeemsi isaanii cuftuu calalamee ifeera. Kan isaan waliin qilee ibiddaa seenee, godaannisa seenaa dalagu warruma akka isaanii dhiiga Oromotiin jireenya qananii hedu yoo ta`e qofa. Gaafatama seenaa fi seeraa jalaa of oolchuuf diinaaf ergamuu irraa deebi`uun, lammiif dhiiguutti deebi`uudha. Dhaamsa koos qaaccesseera